ဆောင်းပါး – Page2– Rakharazu
“ရယ်ဒီကယ်ရို့ကယ်ထားရေ ကမ္ဘာ”
July 23, 2017 ဆောင်းပါးThe Fight For Arakanese IndependenceKhaing Aung Aung
လူမျိုးပေါင်းစုံနိန်ရေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖယ်ဒရယ်သမားလေ့ မဟိရေပိုင် လေဘရယ်သမားလေ့ မဟိပါ။ ဖယ်ဒရယ်ဝါဒကို ကြိုက်တေ ဖယ်ဒရယ်စနစ် ဖြစ်လာစီချင်ရေ လူတိနန့်လေဘရယ်ဒီမိုကရေစီ အကြောင်းကို ဖတ်ဖူးရေ လေဘရယ်ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရေ လူတိရာ ဟိကတ်ပါရေ။ “ဒီမို” လို့နာမေခံထားရေ အန်အယ်လ်ဒီ ဗမာအုပ်စု အစိုးရ ဖြစ်လာခါမှ နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ပြဌါန်းပီးထားရေ ဒီမိုကရေစီ၏စံနှုန်းတန်ဖိုးတိ အားလုံး ယိုယွင်းပျက်သုဉ်းပနာ ဇာဖြစ်လို့ဗမာပဒေသရာဇ်စစ်ဝါဒနောက်ကို လှည့်ပြန်လားခရစွာပါလဲ။ အဖြေက ဒေ ဗမာဒေါင်းတိစွာ ဒီမိုကရက်အစစ်တိ မဟုတ်ကတ်လို့ ပင် ဖြစ်ပါရေ။ ရီကူးသင်နည်းစာအုပ်ဖတ်ပနာ ရီကူးတတ်တေလို့ထင်လားပြီးကေ အဂေါင့်ဂေါင့် ချောင်းထဲကို ရီဆင်းကူးရေခါ မြှုပ်သီလားရရေ အဖြစ်မျိုးစွာ အဂုလက်ဟိ ဒီမိုကရေစီလို့ နာမေခံထားရေ အောက်သားအုပ်ချူပ်ရီး ကြုံတွိနိန်ရရေ အလုံးစုံပျက်သုဉ်းခြင်းနန့်တူနိန်ပါရေ။ Continue reading →
သက်သီပြဖို့ Postulate ပေါ်စကျူလိတ်တိလိုရေ" ဆိုစွာကိုသင်ခရရေ။ ဥပမာ။ ။မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းကို ဖြတ်မျဉ်းတစ်ကြောင်းကဖြတ်ရေအခါ ယင်းမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း အထဲကဖြတ်မျဉ်း၏အတွင်းထောင့်နန့် အပြင်ထောင့်စွာ ဒီဂရီတူရေ။ Continue reading →
June 15, 2017 ဆောင်းပါးArakan HistoryKhaing Aung Aung
ဆင်ခြင်တုံတရားမှာ အခြီခံမထားရေ သမိုင်းအနက်ဖွင့်မှုစွာ ဆင်းရဲတွင်းနက် ဒုက္ခဆိုက်နိန်ရေ လူ့ ဘောင်ကို ထပ်လို့မုန်းတိုင်းတိုက်ပီးစွာနန့် တူနိန်ဖို့ ။
“ဇာသူ ဇာပိုင်ပင်ပြောပြော ဇာပိုင်ပင် သိက္ခာချချ ဇာပိုင်ပင် စုတ်ပီစုတ်ပရွီးရွီး ဇာပိုင်ပင်သမိုင်းမျက်ပေါက် ကျကျိုင်းချေနန့်အနက်ဖွင့်ဖွင့် အေချင့်စွာ ငါရို့အဖိုးအဖီးတိ ဆင်နွဲခရေ တော်လှန်ရီး…. ငါရို့ ဘိုးဘေးဘီဘင်ရို့ ယုံကြည်မှုနန့် ဖော်ဆောင်ခရေ အပြောင်းအလဲ… အေချင့်စွာ ငါရို့ တန်ဖိုး …. ငါရို့ တိမြတ်နိုးကတ်ရဖို့ …” လို့ ပြင်သစ် ပညာရီးဝန်ကြီးက ပြောခပနာ ပြင်သစ်တော်လှန်ရီးနိ ကို နိုင်ငံတော်ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကေ ပြင်သစ်တနိုင်ငံလုံး အခမ်းအနားဂုဏ်ပြုပွဲလုပ် ကျင်းပကတ်တေ။ Continue reading →